Kaamirada Samsung Galaxy S11: | Androidsis
Si tartiib tartiib ah ayaan u baranaynaa faahfaahin cusub oo ku saabsan calanka la filayo oo ka socda shirkadda Kuuriya Waa xaqiiqo muuqata in, Kaamirada Samsung Galaxy S11 Waxay noqon doontaa mid ka mid ah waxyaabaha cusub ee terminal-ka suuqa ku dhufan doona iyada oo ujeedadu tahay in carshiga laga xayuubiyo Huawei Mate 30 Pro qaybta sawirka, Waxayna u muuqataa in hubku aanu maqnaan doonin.
Waxaan horeyba u ogaanay faahfaahin kale oo ku saabsan Kaamirada Samsung Galaxy S11, laakiin hadda xog cusub ayaa la helay oo xaqiijinaya in qaybta sawirka ee xubinta soo socota ee qoyska Galaxy ay noqon doonto mid ka mid ah jibbaaradeeda ugu weyn. Haa, muraayadaheeda 108 megapixel ayaa maskaxdaada qarxin doona.
Soosaarayaasha XDA waxay na siinayaan xog cusub oo ku saabsan kamaradda Samsung Galaxy S11
Iyo wax waliba waa, ragga ka socda XDA Developers waxay kala furfureen APK-kii loo yaqaan 'One UI 2.0 Beta 4 application' oo ka socday Samsung Camera, waxayna ka heleen dhowr layaab oo aad u xiiso badan si ay noo siiyaan fikrado ku saabsan astaamaha qalabku yeelan doono. Waxaan xaqiijin karnaa in kamaradda Samsung Galaxy S11 ay awoodi doonto inay duubto fiidiyowyo ku jira 8 K tayo leh 30 wareeg halkii labaad.
Sidan oo kale, waxaan ku aragnaa boodbood muhiim ah marka loo eego awoodda marka la barbar dhigo moodelladii hore. Intaa waxaa dheer, waa in la xusuusnaado in heerka duubitaankani uu la jaan qaadayo dhawaan soo saaray processor Exynos 990, marka lagu daro Snapdraghon 865 SoC. Wax tixraac ah lagama helin tirada megapixels ee kamaradda ugu weyn ee Samsung Galaxy S11 yeelan doonto, laakiin tixgelinaysa inay si wada jir ah u qaabaysay 108 lens oo megapixel ah, waa la fili lahaa inay leedahay dareemahan.
Dhinaca kale, waxay heleen qaab loo yaqaan "Single Take Photo". Waxay u badan tahay, inay tahay hawl kuu oggolaaneysa inaad sawirro ka qaaddo isla waqtiga fiidiyowga la duubayo, laakiin xilligan iyagu wax kale kama ahan mala-awaalka. Waxaan sidoo kale aragnay qaabka "Director View", kaas oo kuu oggolaan kara adiga inaad doorato qofka safka hore ee taxane kasta si aad ula socoto isticmaalehaas.
Waxa cad waa in Kaamirada Samsung Galaxy S11 Ujeeddada ka sareysa iyo ka sareysa Iyo haddii soo saaraha Kuuriya uu shaqo fiican qabto, waxay noqon kartaa mid ka mid ah bilowga ugu wanaagsan ee 2020.
Sidee looga hortagayaa INE inay iska diiwaangeliso goobta iyo dhaqdhaqaaqa illaa moobilada casriga ah